श्रीमतीका लागि बनाएका छन् किम जोङ उनले यस्ता कडा नियम, सुन्दै अचम्म लाग्छ ! - News25 Daily
July 4, 2020 adminLeaveaComment on श्रीमतीका लागि बनाएका छन् किम जोङ उनले यस्ता कडा नियम, सुन्दै अचम्म लाग्छ !
ती नियमहरुः १. उत्तर कोरियामा ‘फस्र्ट लेडी’ लाई हरेक समय जनमासमा जाने अधिकार हुँदैन । उनीहरुलाई केवल ‘स्पेशल अपियरेन्स’ मा मात्र देखिने अनुमति हुन्छ ।
सन् २००३ मा प्रकाशित अाफ्नाे दाेस्राे पुस्तकमा फुजिमाेताेले लेखेका छन्: “किम जङ-चललाई सबैभन्दा सम्भावित उत्तराधिकारीका रूपमा हेरिन्छ। तर त्यसबारे मलाई शङ्का लाग्छ। किम जङ-इल भन्ने गर्थे, ‘जङ-चल उपयुक्त छैनन्, उनी केटीजस्ता छन्।’
एकसाथ पर्दामा प्रभाष र दीपिका